Eritrea: 6 arrimood oo lama filaan kuugu noqon kara - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaEritrea: 6 arrimood oo lama filaan kuugu noqon kara
Dalka eritrea ayaa lagu sheegaa inuu ka mid yahay waddamada ugu cadaadiska badan qaaradda Afrika, iyada oo ay shacabka dalkaasi ay haysan xurriyad diimeed iyo mid siyaasadeed toona.
Waxaana wax aad loola yaaba ahayn dalkaasi inuu yahay mid uu ka jiro hal xisbi siyaasedeed tani iyo marki uu xornimada ka qaatay Itoobiya 1993-kii uu madaxweyne ka yahay Isaayaas Afawarkii.
Xukumadda Asmara waxay gabi ahaanba dalkaasi ka mamnuucday xisbi mucaarad iyo warbaahin madax bannaan in laga sameeyo dowladdana aan waxba laga sheegin karin.
Arrintaasi ayaa waxay boqollaal kun oo muwaaddiniin Eritrea u dhashay ku qasabtay iney dalkooda ka qaxaan, dad aan yareenna iyaga oo waddamada Yurub u tahriibaya ay ku dhintaan badda Meditrranean-ka
Wariyaha BBC laanta af-Amxaariga Jibat Tamirat oo dhawaan booqday dalka Eritrea ayaa wuxuu warbixin ka qoray waxa uu indhihiisa ku soo arkay, gaar ahaanna gacanta birta ay ku hayso noolasha shacabka dalkaasi.
1) Sim kaarka wuxuu ka yahay dahab oo kale
Shirkadda EriTel oo ay dowladdu leedahay ayaa ah shirkadda keli ah ee bixisa adeegga isgaarsiinta taleefannada. Adeegga ay shirkadda bixisana waa mid aad u liita, dowladduna ay si adag gacanta ugu hayso.
Warbixin uu soo saaray Ururka Isgaarsiinta ee caalamiga (ITU) wuxuu ku sheegay fursadda gelitaanka khadka interneetka inuu yahay 1% oo keli ah.
Sim kaarka wuxuu Eritrea uu ka yahay dahab oo kale. Muwaaddiniinta haddii ay rabaan iney helaan waa iney marka hore iska diiwaan geliyaan wkaalad dowli ah oo ay dowladda ugu talagashay waxaana qofka loo oggol yahay oo keli ah hal Sim.
Haddii aad heshid Sim kaard, khadka interneetka kuma isticmaalki kartid maxaa yeelay khadka interneetka taleefannada uma furno.
Shacabka waxay adeeg interneet ka heli karaan oo keli Wifi, kaasoo oo ah mid adeeggiisu aad u gaabiyo. Haddii aad dooneysid inaad baraha bulshada booqato sida Facebook iyo Twitter, waxay shacabku khadka ku jabinayaan barnaamijka VPN si ay u helaan internet xawaara leh.
Maadaamaa helitaanka Sim card ay shacabka ku adagtahay waxay shacab badan weli ku tiirsan yihiin taleefannada shacabka ee lacagaha lagu shubo.
Afarti maalmood oo aan booqashada ku joognay dalkaasi innaguba waxaan isticmaaleynay taleefannadaasi.
2) Shacabku waxay lacagaha kala bixi karaan bangiyada oo keli ah
Dowladda waxay xayiraad adag ku soo rogtay xaddiga lacagaha uu qofka uu kala bixi karo lacagta ugu jirto Akaawunka uu bangigu ku leeyahay.
Haddii uu Akaawunka bangiga aad ku leedahay malaayiin lacag ah kuugu jirto xataa, wuxuu qofka bishi kala soo bixi karaa oo keli ah 5,000 oo lacagta dalkaas oo u dhiganta ($330) doolar.
Mid ka mid ah muwaaddiniinta ku nool Asmara oo aan la kulmay wuxuu ii sheegay inuu rabay inuu iibsado gaaro Toyata Corolla 1986 la sameeyey, inuu bil walba akaawunkiisa uu ka soo saarayey 5,000 oo naqfa muddo 11 bilood ah. 55,000 cidda uu gaariga ka iibsanayey ayuu lacag caddaan ah ku siiyey halka 55,000 ee harayna uu bangiga ugu diray.
Xafladaha arooskana dowladda Eritrea waxay go’aamisay inaan xaflad weyn oo kharash ka badan 5,000 oo naqfa aan la dhigi karin haddii ay dhacdana fasax dowladeed loo baahanayo.
Qofka haddii u damco inuu xaflad aroos dhigto, waa inuu qofka arooska dhiganaya uu maamulka xaafadda uu deggan yahay uu iska diiwaangeliyaa si uu u helo warqadda fasaxa oo loogu qorayo bangiga si uu ula baxo lacag ka badan 5000 oo naqfa.
Xayiraadda lacagaha ee dowladda Eritrea saartay dadka waddankaasi syaabo kala duwan ayay u arkaan. Qar ayaa waxay aaminsan yihiin “iney dowladda ugu tala gashay iney dowladda xakameyso sicir bararka isla-markaana ay u dhiirrageliso keydka lacagah”, halka ay dadka qaarna aaminsan yihiin “dowladda iney tallaabbadaasi u qaadday si ay u xakameyso dhaqdhaqaaqyada ganacsiga iyo ayna u yareyso dhaqdhaqaaqa lacagaha suuqa ku jira.”
Mashiinnada lacagaha lagala baxo ee ATM kama jiraan dalka Erirea. Ninka gaariga iibsaday wuxuu ii sheegay marki la furay xadka Itoobiya iyo Eritrea sanadki hore xadkaasi oo xirnaa tani iyo marka ay labada dal galeen dagaal, inuu tagay magaalada Maqale ee ku taallo waqooyiga Itoobiya uuna “marki ugu horreysay ku soo arkay dad lacaga badan kala baxaya mashiinnada ATM.”
3) Hal talefishiin oo keli ah ayaa dalkaasi ka jira
Telefishiinka EriTv oo ay dowladda leedahay oo keli ah ayaa ku yaalla dalka eritrea oo ay shacabka dalkaasi daawadaan. Telefishiinkaasi oo afka dowladda ku hadlo, balse haddii aad doneysid inaad daawato idaacadaha BBC iyo warbaahinta kale waxay dadku ka daawadaan Asena Tv iyo ERISAT oo ay leeyihiin siyaasihiin dibadaha ku nool.
Guddiiga Ilaaliya xorritadda wariyeyaasha ee CPJ oo warbixin ka soo saaray xorriyadda Eritrea, wuxuu dalkaasi uu ku tilmaamay dalka “adduunka ugu liita xorriyadda saxaafadda” dalkaasina u ka dambeeya oo keli ah Kuuriyada Waqooyi.
Guddiga oo soo xigatay Kaadamiyada Deutsche-Welle waxay sheegtay “Warbaahinta madaxa bannaan ee ay shacabku dibadaha ka helaan laftooda haddii ay ahaan lahayd telfishiin ama radio laftooda dowladda si ay shacabku si fasiix ah ugu dhageysanb waxay ku furtay shucaac”.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Eritrea Yemane Meskel ayaa diiday eeddaasi loo soo jeediyey ee ku saabsan xukuumadda iney idaacado xirtay. Wuxuuna sheegay 91% shacabka dalkaasi iney warbaahinta caalamka ay saxannada (Satelite dish) kala socdaan in ka badan 650 idaacadood ama telefishiin oo caalami ah.
4) Khamriga iyo Biirta
Warshadda keli ah ee khamriga loo yaqaano Biirta soo saarto ee ka jirta dalka Eritrea ayaa waxay tahay warshadsa Asmara Brewery uu 1939-kii aasaasay Injineer lagu magacaabo Luigi Melottia.
Waxayna shacabka dalkaasi noo sheegeen ilaa iyo wakhti dhow qofka muwaaddinka in laba dhala oo biir oo keli ah goobaha khamriga lagu cabbo loo ogolaa. Balse bilooyinki u dambeeyey xayiraaddaasi waa la qaaday.
5) Dhalinyarada dalkaaso oo badankood ay Tahriibaan
“Helitaanka baasboorka dalkaasi ayaa waxay la mid tahay riya qofka uu ku riyooday oo u rumoowday,” ayuu yiri wiil dhalinyara ah oo aan wada casheyneynay.
Wuxuuna intaa ku daray dhalinyarada in baasboor ay heli karaan oo keli ah marka ay soo dhammeystaan labada sano ee askarinimada waajibka ku ah muwaaddin kasta oo dalkaasi u dhashay, marka uu la yimaaddo warqadda caddeyneyso inuu waajibkiisa soo gutay ayuu heli karaa baasboor.
“Haddiise qofka ay da’diisu tahay 40-45 jir uu xaas iyo carruur leeyahay” baasboor wuu heli karaa.
Qofka marka uu helo baasboorkana sida uu doono waddanka ugama bixi karo oo wuxuu u baahan yahay inuu dowladda ka helo Fiisaha u dalka kaga baxayo. Fiisahaas oo ay adag tahay helitaankiisa maadaamaa ay dowladdu aaminsan tahay qofka haddii mar baxa inuu soo noqoneyn.
Waa sababta keenta dhalinyaro badan oo u dhashay dalka Eritrea iney si sharci darra ah dalkooda uga baxanaa iyaga oo tallaaba xadka waddamada Suudaan iyo Itoobiya kaddibna uga sii tahriiba waddamada yurub, qaar badanna ay saxaraha sii maraan badahana ku dhammaadeen.
Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabislan arrimaha qoxootiga waxay sheegtay dalka Eritrea inuu yahay dalka 9-aad ee ay qoxootiga caalamka ugu badan ka soo jeedaan iyada oo tiradooda lagu qayaaso inta u dhaxeyso 486,200-507,300.
Dalalka qoxootiga ugu badan ee Eritrea a soo jeeda martigeliyeyna waxay kala yihiin Itoobiya (174,000) iyo Suudaan (114,500), halka waddamada yurub oo ay ka mid yihiin Jarmalka (55,300) iyo Swizerland (34,100).
Shacabka guud ee ku nool dalka Eritrea ayaa lagu qayaasaa 3.5 milyan halka ay magalada Asmara ay ku nool yihiin 500,000 oo qof.
6) Caasimad qurux badan
Hoggaamiyihi Faashiistaha Talyaaniga Benito Mussoloni ayaa wuxuu doonayey magaalada Asmara inuu ka dhigo Roomada yar ee Afrika, xilligi uu qorsheynayey gumeysigi 1930-kii.
Magaalada qayba ka mid ah waxaad ku arkeysaa dhismayaal aad u qurux badan oo ku xusuusinaya xilligi uu magaaladaasi guumeysanayey Talyaaniga.
Magaalada Asmara waxaa sida oo kale ku yaallo goobo taariikhi ah oo ay diiwaan gelisay hay’adda UNESCO ee qaramada midoobay, kuwaasoo intooda badan muujinaya hormarka magaalooyinka ee billaawgi qarniga 21-aad.
Dalka Eritrea haddii uu ahaan lahaa dal uu haysan dhibaatooyin siyaasadeed iyo mid dhaqaale, magaala Asmara waxay noqon lahayd magaalo si weyn u soo jiidato dalxiisayaasha adduunka.